Porquerolles, fialokalofana voajanahary idiran'ny Côte d'Azur | Vaovao momba ny dia
Porquerolles, fialofana voajanahary voajanahary an'ny French Riviera
Ny riviera frantsay (France Andrefana atsimo-atsinanana) dia manana zorony kanto amin'ny hatsaran-tarehy miavaka mandritra ny jeografia, ary tsy isalasalana fa ny iray amin'izy ireo dia ny nosy mahafinaritra any Porquerolles, miala ny saikinosy Giens, akaikin'ny tanànan'ny morontsirak'i Hyeres sy Toulon, any amin'ny faran'ny atsinanana an'ny French Riviera.
Porquerolles Izy no lehibe indrindra sy andrefana indrindra amin'ireo nosy amin'ny nosy Hyeres ary manana velaran-tany 1.254 hektara (12,54 kilometatra toradroa) izay manodidina ny 7 km ny halavany 3 km ny sakany. Porquerolles dia zoro paradisa kely any amin'ny Ranomasina Mediterane, misy morontsiraka nofinofy mahafinaritra ary toerana iarovana ny natiora noho ny fepetra fiarovana ara-tontolo iainana henjana.
Ny morontsiraka avaratry ny nosy Porquerolles dia amoron-dranomasina feno fasika izay arovan'ny ala maitso amin'ny hazo kesika, hazo frezy ary hazo miora, ary ny morontsiraka atsimo kosa dia mideza sy feno vatolampy mideza, na dia manana ny morony aza coves azo idirana mora foana. Any amin'ny afovoan'ilay nosy dia vitsy ny trano fonenana ary ny ala kesika sy holm, ny tanimboaloboka ary ny zavamaniry mediteraneana no be mponina indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Porquerolles, fialofana voajanahary voajanahary an'ny French Riviera
Morontsiraka Viareggio, akaikin'i Florence